bollards block chitsuwa
Tsanangudzo:kongiri block bollards, cad block bollard,,,,
Home > Products > Vimba Bollard
Zvigadzirwa zve Vimba Bollard , isu tiri vashandi vanobva kuChina, kongiri block bollards , cad block bollard vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Vimba Bhodhi (Model # TD-TAA219) Technical Parameter: 1.System kutonga: electro-hydraulic 2. Magetsi magetsi: 220V 3. Simba system (w): 300W 4. Paunenge uchikwira: 3-5S 5. Inowira nguva: 3-4S 6. Kunoshanda kupisa: -45 ° C-75 ° C 7.Bearing...
China Vimba Bollard Vatengi
Bollard bollard inoshandiswa pakuvhara mota senge mota kurova zvimwe zvivakwa senge chikoro, mapurisa, kuvaka hurumende. Iyo ine mwenje mwenje wechiedza munguva yehusiku.
Pano unogona kuwana zvigadzirwa zvakabatana muna Vimba Bollard, isu tiri vashandi vezvigadzirwa zve kongiri block bollards, cad block bollard,,,,. Takatarisa kune dzimwe nyika kutengeswa kwekugadzira kwekugadzira, kubudisa uye kutengesa. Takavandudza hutungamiri hwehutano hwe Vimba Bollard kuti tive nechokwadi chega roga rokutengeserana rakagadzirwa.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda pamusoro pezvigadzirwa mu Vimba Bollard, tapota tsvaga tsanangudzo yemiti kuti uone mitemo, mifananidzo, mifananidzo, mitengo uye mamwe mashoko pamusoro pe kongiri block bollards, cad block bollard,,,,.
Chero zvaunenge uri boka kana munhu mumwe, tichaita zvatinogona kuti tikupe iwe nemashoko akanaka uye akazara pamusoro pe Vimba Bollard!
kongiri block bollards cad block bollard